Marihina, hoy Atoa Rasaony Pascal mpikambana ao amin’ity JLM ity, fa ny kajikajy politika maloto mikasa ny hamery zo an’ireo mpifidy amin’ny alalan’ny fanilihana an-kolaka ireo kandidà mpifanandrina, miampy ny fanomanana fangalaram-bato goavana amin’ny fifidianana ho avy ary ny fikasana hanao paipaika maloto hifikirana sy hiverenana eo amin’ny fitondrana ka nanaovana amboletra sy namofompofona kolikoly ny fandaniana ilay lalàm-pifidianana voakajikajy ho amin’ny tombontsoan’ny mpitondra no niteraka disadisa ka nitarika ny fitarihan’ireo solombavambahoaka miisa 73 nitarika ny hetsika teo amin’ny kianja 13 mey. Efa tsy nitsahatra ny nampaneno lakolosy sy nanaitra ny mpitondra mba tsy hanao kajikajy hanilihana ny kandida hafa ary koa nanipika fa hiteraka korontana sy hampifanditra ny lalàm-pifidianana tsy nifampierana amin’ireo hery politika. Dia nitranga ny savorovoro ary dia izao niafara tamin’ny fionganana na faharavan’ny governemanta Mahafaly Olivier izao.
Raharaha maro no nitondran’ny sendika samihafa fitarainana teny an-kianja na mahakasika ny jirama izany na ny mahakasika ny mpampianatra, indrindra ireo raharahana kolikoly sy fanodinkodinam-bolam-panjakana maro. Ireo rehetra ireo no takianay JLM ny hanaovana fanadihadiana azy mba tsy hisian’ny tsimatimanota ka ho afa-maina hatrany. Fanampin’ireo ny tohin’ny raharaha Houcine Arfa sy ny raharaha Claudine Razaimamonjy sy ny tohin’ny raharaha Antsakabary, Soamahamanina, ny ZES sy fitifirana vahoaka tamin’ny 21aprily farany teo. Takian’ny JLM, araka izany, ny hanatanterahana ny tena fanovana marina ka hanasaziana izay tompon’andraikitra ambony voasaringotra amina raharaha tsy mazava nandritry ny fitantanana tao anivon’ny governemanta nesorina.